> Resource> Mac> Recuva Alternative maka Mac
Recuva na-ebe a maara dị ka a kwesịrị-nwere data mgbake usoro ihe omume Windows PC. Mgbe ọ bụla faịlụ na-ehichapụ, formatted, emerụ ma ọ bụ na-efu gị Windows kọmputa ma ọ bụ mbughari media, Recuva nwere ike ịbụ gị lifesaver na ya mfe na-eji na kpam kpam-free atụmatụ. Otú ọ dị, Recuva bụ nanị n'ihi na Windows PC ugbu a, Mac ọrụ enweghị ohere iji nke a dị ike na-free omume naghachi ha furu efu ma ọ bụ ehichapụ data.
Ina nke Recuva maka Mac bụ nnukwu na internet. Mgbe nke bụ eziokwu bụ: e nweghị ukara Mac version nke Recuva, na e nwere ihe fọrọ nke nta dịghị free Mac data mgbake omume kwa. Ọ bụ ike n'ihi na ị ga-ahụ kasị bara uru Recuva ọzọ maka Mac si ọtụtụ utilities na Market. Mgbe ị na-agụ isiokwu a, ị ga-esi 5 ike Recuva maka Mac ọzọ.
Top 4: VirtualLab maka MacOS X
Top 3: Boomerang Data Recovery Software maka MacOS X
MagicCute Data Recovery for Mac bụ ihe dị mfe Mac data mgbake omume na-enyere gị aka naghachi data furu efu ruru nhichapụ, formatting ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Nke a na usoro-akwado mgbake nke ihe karịrị 2000 faịlụ na ụdị na ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na HFS / NTFS, abụba na FAT32.
Ugbu e na 3 mbipụta nke Remo Naghachi (Mac) maka Mac ọrụ ịhọrọ site na. Nke a bụkwa ihe ọjọọ n'akụkụ nke ngwá ọrụ. The Basic Edition, bụ nke na-ndị dị ọnụ ala otu, naanị ohere ọrụ naghachi ehichapụ faịlụ site Mac mbanye ma ọ bụ faịlụ sitụbeghị ahịhịa.
1 Nke a bụ a ngwa ngwa mgbake omume na-achọ ọ pụrụ iche nkà ma ọ bụ ihe ọmụma;
2 MacgicCute bụ a obere ngwa na-enye gị ohere iji wụnye na-agba ya na ihe mpụga ike mbanye;
3 Ihe omume na-akwado ọtụtụ puku ụdị faịlụ;
4 Ị nwere ike ịmepụta disk image ndabere na ngwá ọrụ a.
1 ezie scanning bụ nhazi, ị nwere ike ghara ịkwụsị ya. Ma ọ bụghị dum scanning ga-kagbuo.
VirtualLab maka MacOS X bụ ihe dị mfe omume na-enye gị isi Mac data mgbake. Ngwá ọrụ a na-pụrụ iche na abụọ mgbake ụdịdị: furu efu faịlụ mgbake na iPod mgbake. Ọ na-enyere ndị ọrụ na-naghachi data si un-ndokwasa olu, wakporo mbanye, nakwa dị ka firewire na USB.
1 Ọ na-enye gị pụrụ iche wakporo Constructor;
2 Mpịakọta mgbake-enyere gị aka naghachi data si mebiri emebi ma ọ bụ un-ndokwasa olu.
1 Ị nwere ike ghara ịchọ faịlụ na aha ma ọ bụ ịzọpụta ịgụ isiokwu N'ihi.
Get VirtualLab maka MacOS X
Boomerang Data Recovery Software maka MacOS X bụ ihe ọzọ na Mac data mgbake ngwá ọrụ aka a dịgasị iche iche nke data ọnwụ ndapụta si mberede nhichapụ ka formatting. Ọ bụ ike naghachi ehichapụ, Ị na mebiri emebi faịlụ, nakwa dị ka unmountable na reformatted mbanye.
1 ókè mfe na-eji interface na-azọpụta gị nza nke oge;
2 wakporo mgbake na reconstructor naputa wakporo data na ala;
3 iPod mgbake-enyere gị aka naghachi iPod faịlụ zuru ezu;
1 Ihe omume nanị awade nkịtị iṅomi. Unu ghara inwe ike "N'ime obi iṅomi" na gị na mbanye;
2 Ọ na-adịghị akwado dị ka ọtụtụ ụdị faịlụ dị ka ndị ọzọ utilities ke ndepụta eme.
Get Boomerang Data Recovery Software maka MacOS X
MiniTool Mac Data Recovery na-pụrụ iche na-agbake data si jiri ma n'ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ n'ụzọ ezi uche mebiri emebi ike mbanye. Usoro ihe omume na-enye gị 4 mgbake ụdịdị maka dị iche iche data mgbake ndapụta: undelete Iweghachite, mebiri emebi nkebi Iweghachite, Lost nkebi mgbake na Digital Media Iweghachite.
1 Ọ na-akwado ndị ọzọ ngwaọrụ karịa ndị ọzọ ngwa ke ahịa, gụnyere ide, SATA, SCSI, USB diski ike, kaadị ebe nchekwa, USB flash mbanye na ọzọ;
2 Mgbe gị mbanye bụ n'ụzọ ezi uche ma ọ bụ ahụ mebiri emebi, MiniTool nwere uru nke na-agbake gị data.
1 Ọ na-adịghị akwado HFS na exFAT faịlụ usoro;
2 Ọ na-adịghị akwado Mac OS ala karịa OS X 10.5;
3 The scanning bụ n'ezie ngwa ngwa.
Get MiniTool Mac Data Recovery
Wondershare Data Recovery for Mac Bụ otu n'ime ndị kasị bara uru ma dị ike Recuva maka Mac na-enyere gị iji naghachi Mac data na kemgwucha ike ma dị mfe otú ahụ. Usoro ihe omume na-enye gị ike data mgbake engine, nakwa dị ka mfe interface na onye-nkwụsị mgbake-enyere gị aka naghachi Mac data effortlessly. Ọ na-ekwe ka ị na-naghachi furu efu faịlụ si ma Mac ngwaọrụ nakwa dị ka mpụga nchekwa ngwaọrụ, mgbe ọtụtụ Mac data mgbake omume nanị naghachi data si mbughari media.
1 The ịba uru na-enye gị na otutu mgbake ụdịdị: furu efu faịlụ mgbake, raw faịlụ mgbake, nkebi mgbake, na iPhone data mgbake. Niile nwere miri Doppler ọrụ.
2 Files chọta a ngwa ga-edepụtara ke doro anya edemede dị ka akwụkwọ, ihe oyiyi, videos, music, ozi ịntanetị, na-edebe ihe ochie, ma ọ bụ na faịlụ nchekwa.
3 Ị nwere ike kwụsịtụ mgbake mgbe ị na-faịlụ ị hụrụ, nakwa dị ka ịzọpụta ịgụ isiokwu N'ihi maka oge ọzọ na-eji;
4 Wondershare nwere ike faịlụ preview ikike na ahịa: Ịnwere ike ihuchalu oyiyi, akwụkwọ, ozi ịntanetị na-edebe ihe ochie, nakwa dị ka ekiri ụfọdụ vidio na-ege ntị ọdịyo faịlụ.
5 The oke itunanya iPhone / iPad / iPod data mgbake ọrụ nke ngwá ọrụ a-enyere gị aka naghachi furu efu SMS, kọntaktị, foto na ọtụtụ ndị ọzọ faịlụ site na iTunes ndabere faịlụ na gị Mac;
6 Ihe omume ahụ bụ Ofụri Esịt dakọtara na HFS +, HFSX, FAT16, FAT32, exFAT na NTFS faịlụ usoro.
1 The scanning ọsọ bụ nanị nkezi ke ndepụta.
Olee otú naghachi data na Recuva maka Mac: Wondershare Data Recovery for Mac
Ị nwere ike mfe naghachi gị furu efu data on Mac na 3 nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1 mkpa ka ị họrọ a mgbake ụdịdị mgbe launching ngwa na gị Mac.
Nzọụkwụ 2 Ọ bụrụ na ị họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode, ị nwere ike họrọ a mbanye ma ọ bụ olu gị na Mac na pịa "iṅomi" button ka usoro ihe omume na-enyocha kwa furu efu faịlụ na ya.
Nzọụkwụ 3 Mgbe ahụ gị na mkpa iji họrọ gị furu efu faịlụ na pịa "Naghachi" iji weghachite na-azọpụta ha gị Mac ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa media.
Adobe Systems: Adobe Premiere Pro CS6 maka Mac
Olee otú weghara Video on Mac
Olee otú mmekọrịta iPad Content ka Mac